Other News – Let Pan
ကလေးသူခိုး များ ရန် မှ ကာကွယ်ရန် အတွက် သတိပြု ရမည့် အချက်များ
Let Pan | November 30, 2019
၁။ ။အိမ်ထဲမှ အိမ်ပြင် အတတ်နိင် ဆုံး မထွက်ဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ပါ… ၂။ ။မတတ်သာ၍ ထွက် ခဲ့ရပါက ကလေးနှင့် အတူ လူကြီး ၂ယောက်ပါပါစေ….. ၃။ ။ကျောင်းတက်အရွယ် ကလေးများ ဖယ်ရီ အကြို အပို့ဆိုလျှင် ကားနားအထိ မိဘ ကိုယ်တိုင် သွားခေါ်ပါ…… ၄။ ။မူကြိူအရွယ်ကလေးများနှင့် ဖယ်ရီမကြိုသော
YBS 95 ပေါ်မှာ ယောက်ျား တစ်ဦးက ကောင်မလေး ကို ဘောင်းဘီဇစ် ဖွင့် တုတ်ပြ လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
ကျွန်မ ဒီနေ့ ညီမ၀မ်းကွဲနှင့်အတူ ကျောက်တန်းက အပြန် YBS၉၅ ကားပေါ်တွင် ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်မှာ ကျောက်တန်းအထွက် သန်လျင်လောက်အရောက်မှာ အသက်( ၃၀/၃၅) ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိ ယောကျာ်းတစ်ဦး တက်လာပါတယ်။ ထိုလူသည် ကားပေါ်တက်တက်ချင်းဘဲ ညီမတို့ ထိုင်နေတဲ့ ဘေးနား ကို လာရပ်ပီး ကားပေါ်မှာလည်း လူ အချောင်ကြီးပါ။ အဲ့တာကို
ရန်ကုန် နန္ဒဝန်ဈေး က ရွှေဆိုင်တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရွှေလုပြေးသူ ကို ဖမ်းမိတဲ့ video File
30.11.2019 ရန်ကုန် နန္ဒဝန်ဈေး မှာ ရွှေကြည့်မယ်ဆိုပီး လုပြေးတာ အောင်မြင့်ကြည်ရွှေဆိုင် မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး လုပြေးတာ ဖမ်းထား လိုက်ပါ တယ်…သက်ဆိုင်ရာ ရဲ့စစ်ချက် ကို စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်လို့ လုရတာပါလို့ဖြေလိုက်တဲ့ နန္ဒဝန်ဈေး အောင်မြင့်ကြည်ရွှေဆိုင်က ရွှေလုသူ။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးတောင် ရဲရဲတင်းတင်း လုပြေးတာနော်…ဥပဒေက လျော့ရဲ လာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ခိုးဖို့
ညဖက် အကြာကြီး ပန်ကာ ဖွင့်အိပ်မိတဲ့ ကောင်လေး တစ်ဦး ရဲ့ ဝမ်းနည်စရာ အဖြစ်ဆိုး
ငယ်တယ် ကြီးတယ် ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ….ပန်ကာ ကို သတိထားကြပါ ……။ပန်ကာ ကို ခေါင်းဘက်ကနေ အသေထားပြီး အိပ်ရာ ကနေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး ပြန်မနိုး လာတော့ပါဘူး …..။ကြောက်စရာကောင်း ပါတယ်။ ပန်ကာကို ညဖက် အကြာကြီး ဖွင့်မအိပ်ကျပါနဲ့ …..မသေတောင် အကြောတွေတင်းပီး ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်….လူကြီး မိဘများ အထူး
ပျောက်သွား တဲ့ ကလေးငယ်တွေ ကို ပြန်တွေ့ ခဲ့သော်လည်း ယူကြုံး မရတဲ့ ကံဆိုးမှုကြီးနဲ့
သူတို့ နှစ်ယောက်အား စောင့်ရှောက်ပေးထားပါသည်။မောင်ကျော်စွာဦး နှင့် မထက်ထက်အိလင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကအခုမှ ခိုးပြေးလာကြတဲ့ သူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်စံလည်းတပြားမှလည်းပါမလာကွပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှ မိဘများ သိရှိစေရန်တင်ပြလိုက်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ 09257263334. 0944274707709267400800. ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျာငယ်ရွယ်သူများဖြစ်သည့်အတွက် နယ်စပ်ဒေသတွင် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်အား စောင့်ရှောက်ပေး ထားပါသည်။မောင်ကျော်စွာဦး နှင့် မထက်ထက်အိလင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအခုမှ ခိုးပြေးလာကြတဲ့ သူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်စံလည်းတပြားမှလည်းပါမလာကွပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှ
(၂၀၂၀) ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆို မည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အတွက် အချိန်စာရင်းပါ
၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အချိန်စာရင်းပါ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို အောက်ပါ အချိန်စာရင်းအရ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန မှ ကြေငြာထား ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား
ရည်းစား ကို စိတ်တိုင်းကျ ဆက်ဆံပြီး ဖာခန်း ကိုငွေတစ်သိန်းခွဲ နဲ့ ရောင်းစား လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်
သမီးဖြစ်သူ အိမ်ကနေပျောက်သွားလို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ရဲစခန်း မှာ လူပျောက် လာတိုင်ထားပါတယ်..။ဓာတ်ပုံထဲက ပုဂ္ဂိုလ်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ ရည်းစားပေါ့ဗျာ သူက ကောင်မလေးကို ဆယ့်ငါးရက်ခန့် ခိုးယူပေါင်းသင်းပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဘုရင့်နောင်က ပြည့်တန်ဆာခန်းကိုငွေ တစ်သိန်းခွဲ နဲ့ရောင်းစား လိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒီကောင်မလေး အသက်က ဆယ့်ငါးနှစ် လေးလ လို့ မွေးစာရင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း
တို့ဆေး ဆိုတာ တကယ် ရှိလျှင် ဝယ်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ မေ့ဆေးဆရာဝန်
တို့ဆေး ဝယ် ချင်ပါသည်။ ခုတအားခေတ်စား နေတဲ့တို့ဆေး အကြောင်း တွေးမိတွေးရာ လေးပါ။ မေ့ဆေး ဆရာဝန်ဆိုတော့ တို့ ရုံနဲ့ ကြိုက်တာခိုင်းလို့ရတဲ့ဆေးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားလှသဗျ။စဉ်းစားကြည့်ရင် တကယ့်တို့ဆေးဆိုတာ(တကယ်သာရှိခဲ့ရင်) strongsedative or hypnotic ဆေးတခုခု ဖြစ်ကမယ်။ ဘယ်လောက် strong ဖြစ်ရမလဲဆိုရင် စောင်ကျိုးနည်း ကို strong ရမယ်။ ကြွက်သားထဲကို
သူ့သမီး ကို လက်ထပ် ရင် ဝက်အကောင်ရေ အနည်းဆုံး (၃၀၀) ပေးမယ် ဆိုတဲ့ သမီးရှင် ဖခင်
တရုတ်နိုင်ငံက မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီး ကတော့ သူရဲ့ချစ်လှစွာသော သမီးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမယ့် သမက်ကို ဝက်အကောင်အနည်းဆုံး (၃၀၀)အထိ လက်ဖွဲ့အဖြစ် ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခင်က ထိုင်းမှာလည်း ဒူးရင်းသီးသူဌေးကြီးတစ်ဦးက သမီးကို ဒီလိုပုံစံနဲ့ အစွံထုတ်ဖူး ပါသေးတယ်။ အခု မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းရှင်ကတော့ အသက်(၂၄)နှစ်အရွယ် ချစ်စဖွယ် သမီးလေးကို အိမ်ထောင်ရက်သား
နာမည်ကြီး နေတဲ့ စာသင်တဲ့ ကျောင်းဆရာလေး ကို ထောင်ချောက်ဆင် လုပ်ကြံဖို့ တိုင်ပင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ (ရုပ်သံဖိုင်)
ကလေးဆိုတာ ဘာမှ မစဉ်းစား ဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ လုပ်ချင်တာကို လုပ်တာ သဘာဝတစ်ခုပါပဲနော်။ ကိုယ်တွေငယ်ငယ်ကလည်း အမြဲပေါက်ကရတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား…….? အခုဆိုရင် ချစ်စဖွယ်ကလေးငယ်လေးတွေ သူတို့ရဲ့ကျောင်းဆရာလေးကို လုပ်ကြံဖို့ လုပ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေး မှာ ကလေးတွေဟာ ကျောင်းဆရာလေးကို လုပ်ကြံဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း ကျောင်းဆရာလေး မိသားတော့ ကလေးတွေကို
မိသားစု ဝမ်းရေးအတွက် အာလူးကြော် ထုပ်ရောင်းနေ ရတဲ့ သရုပ်ဆောင် “အံ့မင်းညို”
“အိမ့်ချစ်ပြော တဲ့ မှတ်သားလောက်စရာမေမေ့ မှာတမ်း”
ကျေးဇူးရှင် Myanmar Idol ကို ပရိသတ် နဲ့ ရန်တိုက်မေ ပးသင့်ဘူး လို့ ဖြိုးမြတ်အောင် ကို ပြောလိုက် တဲ့ မိုင်းမိုင်းဆိုင်း
အိမ်စည် က သင်ဇာ့ လောက် မကိတ် ပါဘူး ဆိုတဲ့ ” ရွှေအိမ်စည် “
ဖြိုးမြတ်အောင် နဲ့ အိုင်ဒေါ အရှုပ်တော်ပုံ မှာ လိမ်ညာပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေ ရတဲ့ မေကြည်
Copyright © 2019 Let Pan.